Vondron’ny orinasa eto Madagasikara : hifampizara traikefa amin’ireo Nosy manodidina | NewsMada
Vondron’ny orinasa eto Madagasikara : hifampizara traikefa amin’ireo Nosy manodidina
Manomana fihaonana amin’ny mpandraharaha hafa ny eto an-toerana, hifanakalozan-kevitra sy handraisana traikefa. Nampahalala izany, omaly, ny Club export ao La Réunion sy ny Vondron’ny orinasa neto Madagasikara (Gem).
Hisian’ny fampandrosoana maharitra, miara-miasa amin’ny Club export ao La Réunion ny Vondron’ny orinasa eto Madagasikara (Gem). Ao koa ireo mpandraharaha na orinasa hafa avy amin’ny firenen-kafa aty amin’ny Nosy manodidina, miampy ny avy any Kenya, any Mozambika, any Tanzania, any Afrika Atsimo, sy ny avy any Azia. Hatao ny 21, 22, ary 23 novambra 2018 izany fiaraha-midinika izany ao La Réunion. Anisan’ny lohahevitra hiaraha-midinika amin’izany ny momba ny fambolena sy ny sakafo, harena anaty ranomasina na ny jono, angovo momba ny herinaratra, toekarena amin’ny ankapobeny.
Omaly, nampahafantatra ny filohan’ny Gem, Rakotoarijaona Noro, fa misy ny fiaraha-miasa manokana amin-dry zareo Club Export, ao La Réunion. Tonga eto an-toerana manomana io fihaonana io miaraka amin’ny Gem ny filoha lefitry ny Club export, i François Mandroux. Ampy traikefa rahateo io vondrona mpandraharaha io ka vonona hifampizara traikefa amin’ireo namany hafa hanatrika izany fihaonana izany. Misy orinasa 10 manana ny toerany mampanan-danja azy ireo ny avy eto Madagasikara, amina sehatra samy hafa nasaina manokana handray anjara hifanakalo traikefa amin’ireo hafa.
Nitombo 300 % ny fitaterana an-dranomasina
20 taona izao ny Club export, mihevitra ny hanamafy sy hanavao ny toerany aty amin’ny faritra. Tokony ho vonona hatrany hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ny tontolon’ny toekarena aty amin’ny Nosy manodidina hisian’ny fampandrosoana. Mihahenjana izany fifaninanana izany raha ny fahitana ny fitaterana an-dranomasina nitombo 300 % tato anatin’ny 20 taona farany. Mahazo vahana amin’izany ireo Nosy hafa manodidina raha ampitahana amin’ny eto Madagasikara.
Foibe fototra ho an’ny fampandrosoana ny toekarena maneran-tany amin’izao taonjato faha-21 izao ny aty amin’ny ranomasimbe Indianina, raha ny fanadihadian’ny mpahay toekarena amerikanina iray, Robert Kaplan. Tsy ny varotra iraisam-pirenena ihany ny sehatra iray lehibe fa indrindra koa ny toekarena iombonan’i Chine sy i Afrika. Mbola manamafy izay toekarena izay koa ny fiaraha-miasa amin’ny Vondrona eoropeanina. Tokony hahitan’i Madagasikara tombontsoa ireo fiaraha-miasa rehetra ireo.